Waxgarad ku goodiyay in G/Sanaag ay uga dhawaaqayaan go’aan ka dhan ah Puntland | Somsoon
Home WARAR Waxgarad ku goodiyay in G/Sanaag ay uga dhawaaqayaan go’aan ka dhan ah...
Kadib markii maanta baarlamaanka maamulka Puntland uu kalsoonidii kala noqday guddoomiyahoodii Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobo-daareed, ayaa qaar ka mid ah beelaha dega deegaano ka tirsan gobolka Sanaag waxa ay ka soo hor jeedteen xil ka qaadistii lagu sameeyay guddoomiyaha.
Waxa ay sheegeen inta badan bulshada gobolkaas oo caawa kulamo ku yeeshay magaalooyin dhawr ah in ay go’aan mideysan ka soo saari doonaan ka sii mid ahaan shaha maamulka Puntland ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Dani.
Guddoomiye Cabdixakiim Dhoobo-daareed ayey sheegeen inay si buuxda u taageersanyihiin, iyagoo Madaxweyne Dani u sheegay in wixii haatan ka dambeeya uusan ku xisaabtamin gobolka Sanaag, waxaana qeybo ka mid ah xarumaha maamulka ee magaalada Badhan maanta la suray calanka Somaliland.
Qeybaha kala duwan ee bulshada Badhan oo taageero u muujinayay guddoomiyihii maanta xilka laga qaaday ee baarlamaanka Puntland, ayaa sheegay inay ka tasha doonaan kasii mid ahaan shaha Xukuumadda Madaxweyne Dani.
Guddoomiye Dhooba-daareed ayaa khamiistii maanta waxaa kalsoonidii kala noqotay ilaa 49 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland, kadib 53 xildhibaan oo soo xaadirtay kulankii golaha.
Article horeXog-hayihii IGAD ee uu magacaabay Abiy Axmed oo si rasmi ah xilka ula wareegay
Article socoda Floods kill 25, injure 47 in Somalia: WHO